I-Raspberry Slideshow, indlela esheshayo yokwenza izethulo | Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala
I-Raspberry Slideshow, indlela esheshayo yokwenza izethulo
UJoaquin Garcia Cobo | | Ukusajingijolo Pi
Ukusetshenziswa kwe-Raspberry Pi kukuningi nokuningi nokuningi. Impela ngenxa yegama lesihloko, iningi lenu lizocabanga ukuthi sibhekene nohlelo olusha lokusebenza lwe-Raspberry Pi, kepha iqiniso ukuthi sibhekene nomsebenzi omusha hhayi uhlelo lokusebenza.
I-Raspberry Slideshow imfoloko yeRaspbian lokho kuguqula i-Raspberry Pi yethu ibe ngumshini onamandla ukukhipha izethulo nezithombe zanoma yiluphi uhlobo. Okuthile okufana ne-Kodi okwenziwa manje emhlabeni we-multimedia.
I-Raspberry Slideshow ayigcini ngokushicilela izithombe nezethulo kusikrini esigcwele kepha futhi ine- uchungechunge lwezikripthi ezivumela ukuxhumana nganoma yiluphi uhlobo lweseva, ngendlela yokuthi uma sine-Raspberry Pi 3, sikwazi ukuxhuma kunoma iyiphi iseva bese sikhipha noma sisebenzise izithombe namavidiyo akuleyo seva. Konke ngaphandle kokuthi ube nekhebula eliningi kunentambo yamandla ye-Raspberry Pi nesiqapha noma isikrini.
Isisekelo se-Raspberry Slideshow yi-Debian Stretch, ngakho-ke singasho ukuthi i-Raspberry Slideshow iseseyi-Raspbian elungiselelwe noma eshintshelwe lo msebenzi othile.
I-Raspberry Pi iyi-minipc eya ngokuya yanda kakhulu emkhakheni webhizinisi. Lokhu kungenxa ye- Izinsiza ezifana nalezi esizithola nge-Raspberry Slideshow.
Ukuguqula i-Raspberry Pi yethu ibe yi-Raspberry Slideshow kufanele sikwenze khipha ku-internet isithombe kohlelo lokusebenza bese kufanele qopha isithombe ekhadini le-microsd njengesithombe esijwayelekile. Ngemuva kwalokho kufanele sikhanyise idivayisi bese silandela okokufundisa kohlelo lokusebenza, phakathi kwawo okuzoba izilungiselelo zokuxhuma nenye iseva ukukhipha izithombe noma ezinye izinhlobo zokuqukethwe kwe-multimedia.
Ngokwami ​​ngikuthola kuthakazelisa, hhayi izinkampani kuphela kepha nabasebenzisi abadinga ukudala umbukiso futhi nedlanzana lamaRaspberry Pi's nale software bangayakha ngaphandle kokuba nguchwepheshe wekhompyutha Awucabangi?
Indlela ephelele ye-athikili: Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala » Ukusajingijolo Pi » I-Raspberry Slideshow, indlela esheshayo yokwenza izethulo
IGeneral Electric Additive ilawula iGeonX
I-Endesa Foundation ihlomisa izikhungo zemfundo ezingama-40 eMadrid ngabaphrinta be-3D
Isivivinyo sesiNgisiHlola isiCatalanimibuzo yeSpanishi